Indlwana ka-Tom, eliseceleni kwechibi elingasese - I-Airbnb
Indlwana ka-Tom, eliseceleni kwechibi elingasese
Barry's Bay, Ontario, i-Canada
Thola ukuthula okuphelele nokuphumula kuleli kheshi elingasemanzini e-Serran Lake. Indawo ethule kakhulu futhi eyimfihlo enokubukwa okuhle kwechibi kanye nogu oluhle olukwazi ukufinyelela kalula ukubhukuda, ukuhamba ngesikebhe noma ukudoba.
Itholakala kalula enhliziyweni yeMadawaska Valley ezungezwe amachibi ahlanzekile namahlathi futhi ngaphakathi kokushayelwa kalula ukuya emadolobheni asathuthuka aseCombermere, Barry's Bay naseWilno.
Jabulela ubumfihlo obuhle kakhulu kule ndawo eyihektare engu-1 enomakhelwane oyedwa kuphela oxhumene, idokodo elizimele kanye nolwandle, isikebhe esigwedlwayo esinama-paddles namajakhethi okuphila, umgodi omkhulu womlilo (ukunikezwa kwezinkuni okulinganiselwe okunikezwa mahhala), umugqa we-zip (owezinkathi), i-propane BBQ ( propane enikeziwe) nokunye.
Awusoze wanesithukuthezi lapha ngemisebenzi eminingi yayo yonke iminyaka ehlanganisa ukudoba, ukugibela isikebhe, ukugibela izintaba, ukugibela ibhayisikili, igalofu, ukubuka indawo, ama-ATV, imicimbi yamasiko, imikhosi, iminyuziyamu, nokuningi. Esikhathini sasebusika, ukudoba eqhweni, ukuhamba eqhweni, ukushushuluza eqhweni kanye nokushushuluza eqhweni okunqamula izwe kudumile ngemizila eminingi etholakala endaweni.
Ikotishi lisendaweni yangasese. Kunomakhelwane oyedwa oxhumene naye onamakotishi ama-4 esewonke emgwaqeni ongasekho.
I-Serran Lake ayinamoto. Kuyichibi eliphakathi nendawo elinokudoba okuhloniphekile noma ngabe usuka esikebheni noma usuka nje esikhumulweni semikhumbi. Uzobona izikebhe, ama-kayak nezikebhe zikaseyili zidlula ngaphandle komsindo noma ukungcoliswa kwezikebhe ezinkulu.
Izindawo ezizungezile ngezokuzijabulisa ngokwemvelo - amachibi, amabhishi (idlanzana elikwazi ukufinyelela umphakathi), amahlathi anemizila, izindawo ezikhangayo (kokubili kwamasiko nangaphandle/ukubona indawo) kanye nohambo lwe-adventure (i-rafting, isikebhe, i-ATV-ing, ukuhamba eqhweni, njll.)
Umsingathi uhlala etholakala ngocingo, ngombhalo noma nge-imeyili ukuze aphendule imibuzo yezivakashi nezinto ezikukhathazayo ngaphambi noma phakathi nokuhlala kwazo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Barry's Bay namaphethelo